Konke okokuzithokozisa okuku-inthanethi
4.98 (2260)Ilinganiswe ku-4.98 kokungu-5 ngokusuka kokushiwo abanye okungu-2,260.
·Palombara Sabina, i-Italy·Ingxenye Yokokuzithokozisa ku-Inthanethi kwe-Airbnb
Veza zonke izithombe ezingu- 14
Okokuzithokozisa okuku-inthanethi kubungazwa ngu- Chiara & Nonna
· Ibungazwa nge IsiNgisi ne-Isi-Japanese
Imigubho, imicimbi yasemsebenzini, nokunye.
UMbungazi angayishintsha ukuze ifanelane nalokho okuthandayo.
Uyakwazi ukuxoxa izindaba
Izivakashi zithi lo Mbungazi uxoxa izindaba ezimnandi.
Indlela yokubamba iqhaza
Joyina ucingo lwevidiyo
Sebenzisa i-Zoom ukuze ubambe iqhaza kudeskithophu noma kudivayisi yakho eyimobhayili. Lapho usubhukhile uzothola i-imeyili enelinki nemininingwane yendlela yokujoyina.
Bhukha iqembu langasese
U-Chiara & Nonna angabungaza amaqembu angasese wanoma yibuphi ubukhulu, obufinyelela ezivakashini ezingu-500. Amanani eqembu langasese aqala ku-$291.
Yazana nombungazi wakho, u Chiara & Nonna
Umbungazi ku-Airbnb kusukela ngo-2014
Kusuka ku- $38
Kusuka ku-$291 iqembu ngalinyeKusuka ku-$291/ iqembu
02:00 - 03:30 (EDT)
Amaqembu azimele kuphela
U-$38 umuntu ngamunye$38/ umuntu
Okokuzithokozisa ku-Inthanethi kwe-Airbnb
Yazana nababungazi abacobelelana ngobuchule babo futhi ubone indlela abaphila ngayo.
Okwenziwayo kwamaqembu amancane
Hlangana nabantu abavela kuwo wonke umhlaba kuyilapho nifunda okuthile okusha ndawonye.
Kulula futhi kungokomhlaba jikelele
Joyina kalula futhi ubambe iqhaza usekhaya ngaphandle kokulungiselela okuningi.
4.98 (izibuyekezo ezingu-2,260)
Ilinganiswe ku-4.98 kokungu-5 ngokusuka kokushiwo abanye okungu-2,260.
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-2,260
Uzodinga ukuxhunywa ku-inthanethi nokukwazi ukuthola nge-inthanethi okulalelwayo nokuyividiyo ukuze ubambe iqhaza. Ilinki nemininingwane yokuthi ungajoyina kanjani kuzofakwa ku-imeyili yakho yokuqinisekiswa kokubhukha.